အဆဲဋီကာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cultures » အဆဲဋီကာ
Posted by kai on Mar 18, 2017 in Cultures, Myanmar Gazette | 20 comments
အဆဲဋီကာအတွက်.. အချက်အလက်လေးတွေ… လာစုထားတာပါ…။
သိသူတွေလည်း.. တင်သွားကြပေါ့..။ စာတွေကိုတော့… မှတ်တမ်းအချက်အလက်စုတာမို့..
လူဆဲနည်း ၊ ဘုန်းကြီး ဆဲနည်း ၊ စင်ပေါ်က မိုက်ကရိုဖုန်းနဲ့ ဆဲနည်း ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ profile ပုံမရှိဘဲ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ဆဲနည်း ၊ ကုလား ဆဲနည်း ၊ ဗမာဆဲနည်း ၊ တိုင်းရင်းသားဆဲနည်း ၊ တစ်ဦးစီကို ဆဲနည်း ၊ အဖွဲ ့လိုက်သိမ်းကျုံ းဆဲနည်း ၊ ပါတီ ကို ဆဲနည်း ၊ အစိုးရကို ဆဲနည်း ၊ ဘယ်သူ့ကိုဆဲနေမှန်း မသိရတဲ့ ဆဲနည်း ၊ ကြားလိုက်တာနဲ့ ကြက်သီးမွေညင်း ထလာနိုင်တဲ့ ဆဲနည်း ၊ ကြားလိုက်တာနဲ့ ရုပ်ရှင်ကြည့်နေရသလို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်လာစေတဲ့ဆဲနည်း ၊ မရဲတရဲလေး ဆဲနည်း ၊ တစ်တစ်ခွခွ အားရပါးရဆဲနည်း ၊ တိုတိုလေး ဆဲနည်း ၊ အရှည်ကြီး ဆဲနည်း စသည်ဖြင့် ….
အောက်မှာ.. ရှိတ်စပီးယားရဲ့.. ဆဲစကားတချို့လည်း အင်တာနက်ကရှာပြီးတင်ထားပေးတယ်..။
How To Talk Dirty Using 18th Century Sex Slang, Because It’s Time To Take Your Sexting On A Time Machine Ride
Since 1996, the origin of this kit was listed as anonymous. It came to me onapiece of paper in the 90’s with no attribution, and I thought it would makeacool web page. Though I searched for the origin, I could never find it. In 2014, Lara M found the originating author. An English teacher at Center Grove High School in Greenwood Indiana named Jerry Maguire appears to be the originating author.
the big book of being rude (slang dictionary – pdf) Uploaded by bajamundicj on Feb 25, 2011
လို ကလိန်ကကျစ်မျိုးနဲ့တော့ မဆဲတတ်ပေါင်
ငလုမ ဖလုမ ဂဒုမ အတုခွ လေအိုး မြေအိုး ရေချိုး ယီးပဲ ရီးဘဲ လှီးဘဲ လှည်းဘီး ဆပစား ဆပရှူ
ကိုဘလှိုင် ဘယ်ပျောက်နေလဲ မသိ။ သူဘာသာပြန်ပေးရင် တအားကောင်းမှာပဲ။ ဝေါဟာရ ရှားနေတာနဲ့
မျစ်မမ.. ရှိတ်စပီးယား ကစ် ကို ဘာသာပြန်ကြည့်ပါလား..။
မြန်မာတွေက.. လိင်ကာမစကားလုံးတွေနဲ့တင်.. ချာလပါတ်လည်နေတာ..။
ထေရာဝါဒအရ.. လိင်ကိစ္စဆိုတာကို… ညစ်နွမ်းရှောင်ရှားစရာကြီးဖြစ်အောင်.. လုပ်ထားတာကိုး..
ဝေါဟာရအသစ်.. ဖေါက်ထွက်.. ဖေါက်ထွက်..။
မလုပ်ပါနဲ့ သဂျီး။ ရှိတ်စပီးယားတော့ တို့တောင် မတို့နိုင်သေးပါဘူး။ ဆရာမင်းသုဝဏ်တို့ လီယာမင်းကြီး ပြန်ထားတာ ဘယ်လောက် လက်ဝင်လဲ။ ရှိတ်စပီးယားမှာ မက်ကဘက် ကအလွယ်ဆုံး။ အဲအလွယ်ဆုံးတောင် မဖတ်နိုင်သေးပါဘူး။
သိသူများ မ,စပါ..။ :v:
အမလေးလေး..သူကြီးရယ်…အဆဲပေါင်းမြောက်မြားစွာနဲ ့ပါလား လိုက်မမှီတော့ဘူး။
ဆဲ-ဆိုသောစကားကို ပါဠိလို ဩမသတိဟုဆို၏ ထိုဩမသတိကို မြန်မာပြန်ပါက ဆဲရေး၏ ကဲ့ရဲ့၏ လို့ပြန်ရ၏ ထို့ကြောင်း ဆဲရေးခြင်းမှာ ကဲ့ရဲ့ခြင်းလည်းပါလေ၏။ အလိုမကျလို့ ကဲ့ရဲ့ အပြစ်တင်ခြင်းသည်လည်း ဆဲရေးခြင်း တစ်မျိုးပင်။
၁၀။ အက္ကောသ တို့ဖြစ်ပေသည်။
ဆဲရေးခြင်း တစ်မျိုး တစ်မျိုး၌ ယုတ်ယုတ်မာမာဆဲနည်းမျိုးနှင့် ခပ်ပါးပါး မြင့်မြင့်မြတ်မြတ်ဆဲနည်းဟူ၍ နှစ်မျိုးစီရှိပေ၏။
၁။ ဇာတိ= အမျိုးဇာတ်ဖြင့် ဆဲရေးခြင်း။
ဥပမာ= ဒွန်စဏ္ဍားမျိုး = အလုပ်အကိုင် နိမ့်ကျသူ၊ ခွက်လက်စွဲ၍ တောင်းစားသူ၊ သူတောင်းစား၊ သူဖုန်းစား၊ ဖုန်းတောင်းယာစကာ၊ ဖက်ခွက်စား၊ အမျိုးယုတ်၊ ခွေးသားစားသော ဒွန်စဏ္ဍား၊ သူသေကောင်စွန့်ပစ်သော ဒွန်စဏ္ဍား၊ သုဿာန်စောင့်၊ သုဘရာဇာ။ ဖိနပ်ပြင် ထီးချုပ်စသော အဟောင်း အပျက်ကိုပြုပြင်သော ဒွန်စဏ္ဍား။ သားရေနယ်သမား၊ ပန်းမှိုက်သွန်၊ ကပြား၊ မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမသား၊ မိမစစ် ဖမစစ်သား၊ ဝရမ်းပြေးနှင့် ဖာသယ်မစပ်မွေးသောသား စသည် (အယုတ်တမာဆဲနည်းနှင့်) သူက မင်းမျိုး မင်းနွယ်တဲ့ဗျား၊ ပုဏ္ဏားမျိုးတဲ့ဗျား။ (အလောင်းစည်သူ) ဆရာဝန်ကြီးတဲ့ဗျား (ကျားဖင်သွားမနှိုက်နဲ့ မြွေပွေးသွားမထိနဲ့) ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ မြေးတဲ့ဗျား၊ ဟစ်တလာအမျိုးအနွယ်တဲ့ဗျားစသည် မြှောက်သလိုလိုနှင့် နှိမ်ချသော (အမြတ်ဖြင့်ဆဲနည်းမျိုး) များ။ (နောက်ဆဲနည်းများကို အယုတ် အမြတ် မခွဲတော့ပါ)
ဥပမာ ကျွန်၊ဘုရားကျွန်၊ ကျွန်သပေါက်၊နားရွက်ပြတ်သောကျွန်၊ နှာယောင်ကောက်သောကျွန်၊ မျက်စိတစ်ဖက်ကဏ်းတဲ့ကောင်လေး၊၊ ဗိုက်ကြီးသယ်မ၊ (ဆင်းရဲသူကို) သူဌေးသား၊သူဌေးကြီး၊ သူဌေးကြီး ဦးကပ်စီး၊ သူဌေးကဒေါ်၊ (မပု၊ ဒေါ်တင်ရွှေ) ကုလဝဎုက= ကလေးများများမွေးသူကို ရှင်မွေးလွန်း၊ ငါးစိမ်းသယ်မသား။ သူခိုး၊ ဂျဘိုး ဂျလေဘီ၊ ကာလနာတို်က်၊ မြွေဆိုးကိုက်၊ မိုးကြိုးပစ်၊ မသာကောင်၊ မသာလောင်း၊ လောင်မီးကျ၊ အမွေခံဆိုး၊ ခွေးသား ဝက်မြေး ကျီးသမက် ကြက်ယောက်ဖ၊ ခွေးမျိုး၊ ခွေးဇာတ်ခင်းနေကြတယ် စသည် နှင့် ပါးစပ်ကဘုရား ဘုရား လက်က ကားယား ကားယား၊ ကြောင်သူတော် ကြွက်သူခိုး၊ အနေအထိုင်ကောင်းသူကို ဘုရားလိုလို တရားလိုလို ရဟန္တာလိုလို၊ မနက်ဖြန်ပွင့်တော့မဲ့ ဘုရားကြီးကျနေတာပဲ၊ ဝိနည်းဓိုရ်လိုလို ရွှေကျင်လိုလိုစသည်ဖြင့် မြှောက်သလိုလိုနှင့် မြင့်မြတ်သော ကဲ့ရဲ့ဆဲနည်းများ။
၃။ ဂေါတ္တ= အမျိုးအနွယ်ဖြင့်ဆဲရေးနည်း
ဥပမာ= ကောသိယအမျိုး၊ ဘာရဒွါဇမျိုး၊ ဝမ်မျိုး အမိယုတ်မျိုး၊ အဖယုတ်မျိုး၊ မိန်းမယုတ်မျိုး၊ အနူမျိုး၊ ဇတ်ဇတ်ကျဲ အထိမခံ အော်ကြောလန်အမျိုး လက်ရဲ ဇက်ရဲအမျိုး ကော်တရာ ကပ်စီးနဲအမျိုး စသည်နှင့် ဘုရားမျိုးတဲ့ဗျား မောဂ္ဂလ္လာန်အမျိုးတဲ့ဗျား ကစ္စန=အချောမျိုးတဲ့ဗျား၊ မျိုးကောင်း မျိုးသန့်တဲ့ဗျား၊ ဆွေကြီး မျိုးကြီးတဲ့ဗျား လူသာရူးပေမဲ့ ဘုန်းမရူးဘူး အကျင့်သီလနှင့်ဆိုရင် ရွှေကျောင်းနှင့်မတန် မြက်ကျောင်းနှင့်သာတန်သည် စသည် မြှောက်သလိုလိုနှင့် ကဲ့ရဲ့သောဆဲနည်းမျိုးများ။
ဥပမာ= လက်သမား၊ ကျောက်ဆစ်သမား၊ အမှိုက်ကြုံးသမား ဘင်(ချေး)ကြုံးသူ စည်ပင်သာယာ၊ ပုလိပ်၊ ပန်းရံ၊ ဆိုက္ကားသမား၊ သံတို သံစရောင်းဝယ်၊ အိမ်သားကျင်းတူး အုန်းပင်တက်၊ ဒါးသွေး ကပ်ကြေးသွေး၊ ဒံအိုး ဒံခွက် မုန့်တောင့်နှင့်လဲ၊ ပလပ်စတစ်ကောက်၊ဇာတ်သမား၊ ကချေသယ်၊ အနှိပ်သယ်၊၊ မုတ်ဆိုး တံငါ၊ လိင်လုပ်သား၊ လယ်သမား၊ ကုန်သည် ပွဲစား မွေးမြူရေးစသည်။
ဥပမာ= ထရံကာ ဖျာယက်၊ အိုးဖုတ်၊ သစ်ခုတ်၊ ထင်းခွေ၊ ရေခတ်၊ ယက္ကန်းခတ်၊ သားရေနယ် ခဝါသည်၊ ဆေတ္တာသည်။ ခေါင်းရွက်ဗျက်ထိုးဈေးသယ်၊ နတ်ကဒေါ် ဦးရှင်ကြီးတင်သူ ကွက်စိတ်ဆရာ ဘိတ်သိပ်ဆရာ သိုင်းဆရာ စသည်နှင့် ၊ ဟူးရား ဂဏန်းခေါ်သချင်္ာဆရာ စာရေး စာချီ၊ ကျူရှင်၊ ဗေဒင် လက္ခဏာဟောစားသူစသည်။
၆။ အာဗာဓ= ရောဂါ ဝေဒနာဖြင့်ဆဲခြင်း
ဥပမာ= နာတာရှည်၊ ဝက်ရူးပြန်၊ ခွေးရုးပြန်၊ ရှုနာ ရှိုက်ကုန်း၊ ပွေး ဝဲ ညှင်း ဂျွတ် ဒက် ဝက်ခြံ တင်းတိတ်၊ အသဲရောင် အသားဝါ၊ တီဘီအဆုပ်နာ၊ ဂရင်ဂျီ၊ လိပ်ဂေါင်း၊ ရောဂါသယ်၊ လက်ဗရိုစီ၊ ကင်ဆာ၊ H I V ၊ A I D S၊ (အနာထပိဏ်သူဌေး) စသည်။
၇။ လိင်္ဂ= လိင်၊ အသွင်အပြင်ဖြင့်ဆဲခြင်း
ဥပမာ= အခြောက်၊ ဂန်ဒူး၊ မိန်းမလျှာ၊ ယေကျ်ားလျှာ၊ ပဏ္ဍုက်၊ ဥဘတောဗျဉ်း (လိင်အင်္ဂါ နှစ်ခုပါသူ) လမ္ဗီ၊ မုဒုပိဋ္ဌိက ခါးရှည်သူ အကြောပျော့၍ မိမိအင်္ဂါစပ်စုပ်နိုင်သူ၊ ဘောကျသူ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သူ ရုပ်ကလပ်က စုပ်ပြတ်၊ ရူပါက ချူချာ၊ မဲတူမ၊ မိပိန်သေး၊ ဝက်ပုတ်၊ ပြိတ္တာ၊ ကုလား၊ ကုလားမ၊ ခွေးကုလား၊ ခွေးလခွန်ဆောင်းသူ၊ အရှည်ကြီး၊ ငပု=ဂွတို၊ ခွေးပု၊ ခရုသင်းစွဲသူစသည်။
၈။ ကိလေသာ= လောဘ ဒေါသ စသည်ဖြင့် ဆဲခြင်း
ဥပမာ= လောဘကြီးသူ=နှမြောသူ၊ ဒေါသကြီးသူ=လက်ရဲ ဇက်ရဲရှိသူ၊ မောဟကြီးသူ=သူများယောင်လို့ယောင် အမောင်တောင်မှန်း မြောက်မှန်းမသိသူ၊ မာနကြီးသူ၊ ဂုဏ်မြင့်သူ ဘဝင်မြင့်သူ ၊ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၊ တွေဝေသူ၊ အရှက် အကြောက်မရှိသူ မနာလို ဝန်တို ဣဿာ မစ္ဆရိယများသူ စသည်။
၉။ အာပတိ္တ= အာပတ်၊ အပြစ်ဖြင့်ဆဲခြင်း။
ဥပမာ= ရဟန်းများ ဒုက္ကဋ်အာပတ်သင့်သူ၊ သံဃာဒိသေသ်အာပတ်သင့်သူ၊ ပါရာဇိကကျသူ။ ယုံကြည်မှုကို အလွဲသုံးစားလုပ်သူ၊ လာဘ်ပေး လာဘ်ယူသူ၊ ကျွန်ယုံ တစ်ဖက်ကဏ်း သားသမီးယုံ စုံလုံးကဏ်းစသည်။
၁၀။ အက္ကောသ= တိရစ္ဆာန်၊ လိင်စသည်ဖြင့် ညစ်ညမ်းသောဆဲနည်း
ဥပမာ= ခွေး၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက်၊ တိရစ္ဆာန်ကောင်၊ သေရင်ငရဲကျမည့်ကောင်၊ အဝီစိကျမည့်ကောင်၊ ငရဲအိုး ဂျိုးကပ်မည့်ကောင်၊ ငရဲအိုးဇောက်ထိုးဆင်းရမည်ကောင်၊အပါယ်ကျမည့်ကောင်၊ ဇိကုတ် နတ်ပြည်တင်လို့မရတဲ့ကောင်၊ ယကာရ ဘကာရ (ယောနိ၊ဘဂ) ကာဋကောဋစိကာယခေါ် မိန်းမယောက်ျား အင်္ဂါဇာတ်များဖြင့် အယုတ်တမာဆဲနည်းအမျိုးမျိုး တို့ဖြစ်သည်။
… ချဉ်ပေါင်ရိုးမ | ဒုတ်ထိုးမ | အီကြာကွေး တစ်ပိုင်းပြတ်မ | စမူဆာကြွက်ကိုက်မ | အာဝါဒါးမ | တဆယ့်ဖိုး ၃ယောက်မ | ငံပြာရည်မ | ရင်ထု လင်လု ခေါင်းအုန်းမ ဖက်လုံးမ | အမ်းကုန်းမ | မန်းကျီးရွက် ပိုးကိုက်မ | အော်လီမ | ဒူးရင်းသီး မော်တာတပ်မ | တော်သလင်း ဖော်ကမြင်းမ | မျောက် ၂ပိုင်း၁ပိုင်းမ | ဖိနပ်ခေါင်းအုန်း အိပ်တဲ့ဟာမ | ဖေတစ်ရာ မောင်တစ်ကျိတ်နဲ ့တွေ ့လို့ဖင်ပြတ်သေမယ့် မသာမ | ကလေကချေ အုတ်ကြား မြက်ပေါက် လမ်းဘေး ချီးယို ဓာတ်တိုင်သေးပန်း ပလပ်ဖောင်း ခေါင်းခု မိုးရွာမှ ရေချိုး အလှူရှိမှ ထမင်းစားတဲ့ အမြှီးတိုမ | ဘင်္ဂလီ မယားငယ်မ | မသာအိမ် ကွာစိနိုက်မ | follow မ ၊ ဖျင်နာနာ ရိုးမ ၊ ၂ဘိပြောင်း အဟောင်းမ ၊ စကမျဉ်းမ ၊ ဗိုင်းနာမ ၊ တေလေ ဂျဗလွတ်မ ၊ ရေပေါ်ဆီမ | မုန့်လုံးရေပေါ်မ | ၁လုံးချိုင့်မ | ကေတီဗီမ | စင်တင်မ | စနက်တံမ | စစ်ကိုင်းပဲလှော်မ | ဆင်မဖြုံ ဟားတိုက်မ | သင်္ဘောဦး ဖင်ကြားဝင်မ | ပြောင်းဖူးရိုးဒလက် စအိုတပ်မ | ၂၄နာရီ ရရက် လက်လက်ထမ | ပူစီနန် ့မ | အနူမ | အပ်ချည်ကြိုး ကတောင်းကြိုက်မ | အညာစလေဇီးသီးမ | ငါးမူးလည်းအမ်း ဖင်လည်းနမ်းတဲ့ ကောင်မ | သောက်ကြောနာမ | ဂဏန်းကျစ်စာခဲ့နဲ့အီးကုန်းတဲ့ ဟာမ | ကော့ပန်းမ
ချဉ်ပေါင်ရိုး ♪ ♫ ♪ ♫ ဒုတ်ထိုးမ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ၊ အီကြာကွေးတပိုင်းပြတ်မ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ စမူဆာကြွက်ကိုက်မ♪ ♫ ♪ ♫ ၊ အာဝါဒါးမ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ၊ တဆယ်ဖိုးသုံးယောက်မ♪ ♫ ♪ ♫ ငံပြာရည်မ ♪ ♫ ♪ ♫ ၊ ရင်ထု လင်လုမ♪ ♫ ♪ ♫ ၊ ခေါင်းအုံးမ ဖက်လုံးမ အမ်းကုန်းမ မျောက်စပိမီးလောင်မ♪ ♫ ♪ ♫ အရွတ်တုံးမ၊ မန်းကျီးရွက် ပိုးကိုက်မ၊ အော်ဒါလိုက်မတွေ၊ ♪ ♫ ♪ ♫ ဒူးရင်းသီးမော်တာတပ်♪ ♫ ♪ ♫ တော်သလင်းဖော်ကမြင်းမ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ေ♪ ♫ ♪ ♫ မျာက်နဲ့လောက် စပ်ဖောက်တဲ့ ♪ ♫ ♪ ♫ ပူစီမ ဖိနပ်ခေါင်းအုန်း အိပ်တဲ့♪ ♫ ♪ ♫ ၊ သုံးဘီးကားမ ဂါလံ၁၆၀ဝမ၊ နှစ်စီးတွဲ အပ်ချည်ကြိုးကတောင်းကြိုက်မ ♪ ♫ ♪ ♫ ၊ ဖေတစ်ရာမောင်တစ်ကျိပ် နဲ့တွေ့လို့ ဖင်ပြတ်သေမယ့် မသာမ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ မုန့်လုံးရေပေါ်မ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ၊ ဘူးသီးကြွက်ကိုက်မ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ၊ အာပုံအသိုးမ၊ ကလေ ကချေ အုပ်ကြား မျက်ပေါက် လမ်းဘေး ချီးယို ဓတ်တိုင် သေးပန်း ပလက်ဖောင်း ခေါင်းခု မိုးရွာမှ ရေချိုး ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ အလှူရှိမှ ထမင်းစား တဲ့ အမြှီးတို စပိ ကင်းကိုက်မ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ အညာဇီးသီးမ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ကနုတ်ပြောင်းဖူးမ♪ ♫ ♪ ♫ ၊ ဘင်္ဂလီ မယားငယ်မ၊ အနူမ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ကေတီဗီမ စင် တင် မ ♪ ♫ ♪ ♫ ၊ ငါးမူးလည်းအမ်း ဖင်လည်းနမ်း ♪စစ်ကိုင်း ပဲလှော် မ
The Big Book of Being Rude: 7000 Slang Insults (Reference) Paperback – March 1, 2003
by Jonathon Green (Author)
8 New from $1.40
မြန်မာရိုးရာထဲပါတဲ့ နတ်တွေထဲ.. အဆဲကြမ်းတဲ့နတ်တွေပါတယ်..။
အမေဂျမ်း၊ မနှဲလေး၊ ဦးမင်းကျော် တို့ပါ…။
အပြင် (၃၇) မင်းနတ်တွေကတော့
၁။ သိကြားမင်း (သက္ကမင်း)
၂။ မဟာဂီရိနတ် (မောင်တင့်တယ်)
၃။ နှမတော် မမြတ်လှ (မောင်တင့်တယ်၏ နှမတော်)(မိဖုရား စောမယ်ယာ)
၄။ ရွှေနဘေနတ် (မင်းတုန်းမြို့သူ ၊ မောင်တင့်တယ်၏ဇနီး)(နဂါးမယ်တော်)
၅။ သုံးပန်လှနတ် (မောင်တင့်တယ်၏ နှမ၊(ဥက္ကလာပ မိဖုရား) မနှဲလေး၏ မိခင်)
၆။ ရွှေနှဲမိ (ခေါ်) မနှဲလေး (သုံးပန်လှနတ်၏ သမီး)
၇။ တောင်မကြီး ရှင်ညို (ရွှေနဘေ၏ သား)
၈။ မြောက်မင်း ရှင်ဖြူ (ရွှေနဘေ၏ သား)
၉။ ထီးဖြူဆောင်းနတ် (အနော်ရထာ၏ ခမည်းတော် ကွမ်းဆော်မင်း )ကွမ်းဆော်ကြောင်ဖြူ
၁၀။ ထီးဖြူဆောင်း မယ်တော်နတ် (ကွမ်းဆော်မင်း၏ မယ်တော်)
၁၁။ ပရိမ္မရှင်မင်းခေါင် (ကွမ်းဆော်မင်း၏ သား)
၁၂။ ရွှေဖျင်းကြီး (တောင်ပြုံးမင်းကြီး)(ပတိတ်ခရား၏သား) ဗျတ္တ၏သား
၁၃။ ရွှေဖျင်းငယ် (တောင်ပြုံးမင်းလေး)(ပတိတ်ခရား၏သား) ဗျတ္တ၏သား
၁၄။ မန္တလေး ဘိုးတော် (ရွှေဖျင်းညီနောင်ကို ပြုစု မွေးမြူခဲ့သူ)
၁၅။ ရှင်ကွ (မန္တလေး ဘိုးတော်၏ နှမ)
၁၆။ ညောင်ချင်းအို ( သထုံမနူဟာမင်း၏ အနွယ် )(ခြေတိုလက်တို ညောင်ချင်းအိုနတ်)
၁၇။ မင်းစည်သူ အလောင်းစည်သူ (၄၇၃-၅၂၉)
၁၈။ မင်းသား-ဒန်းမောင်ရှင် (အလောင်းစည်သူမင်း၏ သားတော်၊ ဒန်းစီးယင်း ပြုတ်ကျ၍ သေသည်။)
၁၉။ ကျော်စွာနတ် (တောင်ခြေရင်းဝါခင်းစောင့်သည့် အောင်ကျော်(ခေါ်) မိုးခေါ်ကျော်စွာနတ်)
၂၀။ အောင်စွာမကြီး ( ပုဂံ နရပတိမင်း၏ အမတ် ငအောင်စွာ )
၂၁။ ရွှေစစ်သင်နတ် ( ပုဂံ စောမွန်နစ်မင်း၏ သား)
၂၂။ မယ်တော် ရွှေစကား (ပုဂံ စောမွန်နစ်မင်း၏ မိဘုရား)
၂၃။ ငါးစီးရှင် (ပင်းယသီဟသူ၏ သား ) ငါးစီးရှင်ကျော်စွာ
၂၄။ မင်းတရားနတ် ( အင်းဝမင်းခေါင်၏ နောင်တော် တရဖျားမင်း)
၂၅။ မောင်ပိုးတူ (ကုန်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအတွက်နတ်)
၂၆။ အနောက်မိဖုရား ( အင်းဝ မင်းခေါင်၏ အနောက်ဆောင်မိဘုရား)
၂၇။ အောင်ပင်လယ် ဆင်ဖြူရှင်နတ် ( သီဟသူမင်း)
၂၈။ ရှင်ကုန်း (အောင်ပင်လယ် ဆင်ဖြူရှင်နတ် ၏ ကိုယ်လုပ်တော်)
၂၉။ ရွှေနော်ရထာ ( အင်းဝ ဒုတိယမင်းခေါင်၏ မြေး)
၃၀။ မင်းရဲအောင်တင် (သာလွန်မင်း)
၃၁။ မောင်မင်းဖြူ ( အင်းဝခေတ်မှ ဘုရင့်သားတော် )
၃၄။ မြောက်ဘက်ရှင်မ ( တပင်ရွှေထီး၏ အထိန်းတော်)
၃၅။ တောင်ငူရှင်မင်းခေါင် ( မြောက်ဘက်ရှင်မ နှင့် မင်းရဲသိင်္ခသူ တို့၏သား)
၃၇။ ယွန်းဘုရင် ( ဇင်းမယ်ဘုရင် ဗြသံ) တို့ဖြစ်ပါတယ်။
အပြင်(၃၇)မင်းနတ်တွေရဲ့ ပူဇော်ပသမှုတွေကို ယနေ့ထိအောင် ရိုးရာပွဲတော်တွေအဖြစ် တည်ရှိနေတာကြောင့် လူသိများလှပါတယ်။
အတွင်းအပြင် စာရင်းမှာ မပါဝင်ပဲ လူသိများတဲ့ အခြားနတ်တွေကတော့…
၇။ ရွှေပြည့် မြင်းဖြူရှင်၊
၁၃။ အနောက်မယ်တော် (အမေရေယဉ်)၊
၂၅။ မိုးခေါင်ကျော်စွာနတ် တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
Sa Yar san says:
မြန်မာနတ်တပ်မတော်ကြီးကတော့.. ဟိန္ဒူနတ်တွေကို ၃၆မင်းကို အတွင်းအပြင်လုပ်… ၂ဆတိုးထားယုံမက.. အပိုဆု၂၅ပါထည့်ထားသေး.
တိုင်းပြည်ကို တကယ်သတ်နေတဲ့ နတ်တွေ..။
သူကြီး ဘယ်နားက သွားစုထားလဲ မသိဘူး …. မကြားဘူးတာ အဓိပ္ပါ ယ် မပေါက် တာတွေလည်း အများကြီး …
…ပုဏ္ဏားအင်..။ ဟူးရားတာ..။ ဟူးရားနက်.တို့ ဆီကစုတာပါ..။ အင်တာနက်ပေါ့..။
ဆိုတော့.. ဂျပန်မှာနေတုံး.. ဂျပန်တွေဆဲစကားကို သတိထားမိတယ်..။
သူတို့မှာ.. ဘကဲယားရိုး၊ ဘက၊ တကော၊ ကွန်နယားရိုး၊ အာဟိုး..၊ကုဆိုး လောက်နဲ့တင် ကုန်နေတာ..။
မြန်မာကျတော့လည်း.. လိင်တန်ဆာနဲ့တိုင်းထိုးပြောစကားမှာတင် တော်တော်နာကြပုံရပြီး.. အဲဒါနဲ့တင်တိုင်ပါတ်နေ..။
ဆဲတာများဗျာ အကုုသိုုလ်ဖြစ်ခဲံပီးရေးနေကြတယ် သီလစောင့်ကြပါဗျာ